TANSY: GURYAHA DAWOOYINKA IYO KA HORTAGA, FAA'IIDOOYINKA IYO DHIBAATOOYINKA, URURINTA IYO SHARAXAADDA. SIDA LOO QAATO IYO DHIR DHIRTA: DECOCTION IYO FALEEBO EE GEEDO - SOOSAARKA DALAGGA
Waa maxay faa'iido leh, iyo waxa ay u egtahay tansy
Qalabka dawooyinka ee tansy ayaa la aqoonsan yahay oo keliya dadwaynaha, laakiin sidoo kale dawo rasmi ah. Intaa waxaa dheer, dakhliga soo galey waxaa ku jira daawooyinka farmasiyada ee tiro ka mid ah dalalka horumaray. Oo haddii geedaha yaryar ay ku dadaalaan in ay hubiyaan in kaydka alaabta ceeriin ee warshadan aan marnaba laga saarin guriga, ka dibna muwaadiniinta caadiga ah, kuwaas oo aan haysanin macluumaad ku saabsan sifooyinkiisa bogsiinaya, ma fiirin karaan indho-la'aanta ah. Waa maxay sifooyinka Tansy, haddii cawska loo muujiyo qof walba, iyo sida loo daaweeyo - waxbaan ka sheegi doonaa tan danbe.
Tansy: dabeecada botanical
Si aad u hesho Tansy cimilada diiran - ma ahan dhibaato. Geedka waxaa laga helaa meel kasta: meelo ka baxsan waddooyinka, geesaha kaynta, duufaannada qulqulaya, bangiyada qulqulka, goobaha buuraha iyo steppe. Tani waa duur joogta ah oo aad u caan ah, taas oo botanistu ay isku daraan caan gooni ah waxaana lagu dhajiyay qoyska Aster.
Dunida, saynisyahannadu waxay kala saaraan 170 nooc oo dhirtaas ah. Kala badh ayaa si weyn loogu yaqaan dadka deggan wadamada yurub.
Ma taqaanaa? Luqadayaashu waxay ku xiran yihiin asalka luuqada Laatiinka (tanacetum) ereyada Giriigga ah "tanaos" iyo "aceomai", oo ku turjunsan "nolol dheer".
Xaaladaha qaarkood ee tansy waxaa laga helaa oo kaliya dalalka Waqooyiga Afrika ama Aasiya. Saddexaad ayaa doorbidaya inuu horumar ka sameeyo Ruushka.
Ka baxsan, cawska waa geedo daa'in ah oo leh xididdada lignified, dheer afkoda, caleemaha feathery iyo inflorescences yar.
Haddii aad si dhow u fiirsato, waxaad hubaal ka dhigi doontaa in aad la kulantay mid ka mid ah warshad ka badan hal mar. Xaaladaha wanaagsan, waxay gaari kartaa dherer dherer ah. Meelaha hore, qaybta xagjirka ah sidoo kale waa xayawaan. Ilaa caleemaha sare waxoogaa yar yar oo la jarjarey oo la jarjaray. Caleenta cufan waxaa calaamad u ah hooska cagaaran ee cagaaran, iyo dhismo adag oo aad u la mid ah taarikada caleenta caleenta. Sababtoo ah tilmaan-bixintan tansy waxaa badanaa lagu magacaabaa ash ama buur xayawaan ah.
Geedka ubaxyada bilowga xagaaga, haynta ilaalada dhalaalaya oo dhalaalaya oo yar yar illaa iyo Sebtembar. Qaababka ubaxa ubaxa ee tansy waa badhano badan oo la mid ah, kaas oo sharxaya magaca kale ee caamka ah ee geedaha.
Waa muhiim! Waa arrin qadar leh si loogu diyaariyo decoctions iyo tinctures of tansy ee taangiyada aluminium. Xaqiiqdu waxay tahay in qaybaha dhirta ee dhirta, xitaa waqti gaaban ee dheriga, falcelin leh wax. Natiijo ahaan, abuuritaanka xayawaanno waxyeello u leh caafimaadka.
Xilliga dayrta, wareega afkoda leh geesaha ciriiriga ah u bislaadaan on tansy afkoda. Si ay ugu fiican ee koritaanka, waxay ku qarxeen, sidaas darteed ku biirinayaan soo baxa of is-seeding.
Meelo badan oo sayniska ah, tansy waxaa lagu gartaa sida daawo, saliideed, cuntada, malab-qaadista iyo isla mar ahaantaana geedo sun ah.
Noocyada walxaha qarxa ee sifooyinka caafimaad leh iyo khatarta leh waxaa sabab u ah habka kiimikada ee qani ah. Noocyada nafaqada waxaa ka mid ah saamiga libaaxa waxaa lagu qabtaa:
saliid muhiim ah, xaddiga taas oo ku xidhan wakhtiga ururinta qalabka dhirta (badankeeda waxaa laga helaa dhaqanka muddada ubax - laga bilaabo 1.5 illaa 2%);
alkaloids (laga bilaabo 0,04 ilaa 0.5%);
acid acid tanacetic;
tanacetin (walax qadhaadh);
flavonoids (luteolin, quercetin, cosmosiin, isorhamnetin, tilianthin);
dabiiciga ah karboksilic (caffeic, chlorogenic);
Dhir daawooyin badan ayaa ku talinaya isticmaalka inflorescences qalalan ama cusub iyo sidoo kale caleemaha tansy ee daaweynta. Tani waxay sabab u tahay fiirsashada sare ee saliidda lagama maarmaanka ah. Waa dareeraha midabka jaalaha ah ama cagaaran.
Ma taqaanaa? Masriyiintii qadiimiga ahaa waxay ogaadeen in tansy uu ahaa cayayaanka aad u fiican. Tani waa caddaynta xaqiiqda ah in budooyinka kala duwan, aerosolooyinka iyo udubka loogu talagalay soo-saaridda ka tagay ayaa laga sameeyey cawska.
Qaybta daaweynta ee qaybtan ee warshadu waa isku-darka pinen, L-camphor, borneol, dioxylactontanacetin iyo thujone.
Nafaqadii ugu dambaysay waxay siisaa sunta cawska. Waxay caan ku tahay in cadadka walxadani ay ku xiran tahay meesha koritaanka baadiyaha. Waa inaad ogaataa in kuwa koraan hooska ay yihiin sunta yar.
Guryaha dawooyinka ee tansy
Tansy waxaa si weyn u isticmaala geedo yaryar sida antioxidant, xanuunka, bogsashada nabarka, tonic iyo wakiilka anti-bararka. Isticmaal qiyaaso dhexdhexaad ah, walxaha sunta ah waxay burburiyaan maadadaha loo yaqaan "pathogenic microbes" waxayna gacan ka geystaan ​​adkaynta nabarrada. Waxaa intaa dheer, dhirta ayaa saameyn ku leh beerka, gallbladder iyo xubnaha dheefshiidka.
Waa muhiim! Tansy uma dulqaadan karo qashinka, kaneecada iyo boodada. Si ay uga takhalusaan cayayaanka dhibkan, waxaa ku filan in ay ku dhajiyaan bouquet qolka leh burooyinkeeda yar ee ubaxyada.
In kasta oo uu suntan yahay, dhirta ayaa faa'iido u leh cudurada soo socda:
boogaha mareenka caloosha iyo mindhicirka;
abuurida gaaska xad dhaafka ah;
Waxaan kugula talineynaa inaad baratid sida loo isticmaalo daaweynta hargabka: Salvia, gabbaldhowrka, echinacea, barberry, catnip, halbowlaha iyo shaaha faleebada si fiican loo yaqaan.
guul darrooyinka wareegga caadada;
Ka faa'iideysiga caadiga ah ee wareegga caadada: cabitaanka rummaanka, caanaha lafaha, cawska, cawska, dhir, ivan shaaha, cabitaanka macmacaanka, juuska burcadiga ah, xajka iyo xakamaynta.
acidity hoos u caloosha;
Buufiska (cadaadiska dhiigga yar);
Soo saaridda Tansy waa mid caan ku ah warshadaha qurxinta, maxaa yeelay waa qayb ka mid ah qaybaha kala duwan ee jirka, wajiga iyo alaabta daryeelka timaha. Geedka waxaa kale oo uu u shaqeeyaa sida walax firfircoon ee dhowr ah choleretic, kilyaha iyo dhadhanka.
Waa muhiim! Xitaa qayb yar oo ka mid ah geedaha daawadani waxay dhalin kartaa sumeyn daran oo xoolo ah. Haddii lo'da cuno dhowr caleemo oo tansy ah, caanahiisu waxay helayaan ur aan fiicnayn iyo dhadhan qadhaadh.
Suuqa dawooyinka caalamiga ah maanta, daawooyinka caafimaadka ee Belgian, Finnish iyo Portuguese ayaa ku saleysan tansy caadiga ah waxay u baahan yihiin baahi weyn.
Intaa waxaa dheer, in farmashiyo kasta waxaa jira qalab loo isticmaalo in lagu daaweeyo mindhicirrada, beerka, neefta, laabotimanka. Waxaa sidoo kale jira lacago gaar ah oo caloosha, qaybta ugu weyn ee taas oo ah warshad this. Qarsoodiida waxtarka tansy waxay sabab u tahay saameynta kakan ee walxaha ka soo horjeeda. Marka ay jirka ku jiraan, waxay kordhiyaan dheecaanka geedka caloosha iyo mindhicirada, waxay kordhiyaan dhaqdhaqaaqa mindhicirka, xoojinta nidaamka difaaca jirka iyo hagaajinta waxqabadka nidaamka wadnaha iyo xididdada dhiigga, xubnaha gudaha ayaa hagaajiya shaqadooda.
Waxa kale oo saameyn togan ku leh gobolka nidaamka wadnaha iyo xididada leh: hellebore, feeraha, dabocase, cumin, silica iyo sharaabka.
Dadka qaba cudurrada "hypotonic", madax-xanuun badan iyo xiiso-xumo, dhakhaatiirtu waxay ku talinayaan in ay ka cabbaan ubaxyada la bakhtiiyey ee geedka.
Kadib kooras todoba maalmood ah, caadada cadaadiska dhiigga iyo xajmiga qanjirada wadnaha ayaa la xusay, arsenyana sidoo kale waa la tirtiray.
Ogsoonow in daawada dhaqanku ay kugula talineyso qallajinta tansy ee isla xaaladaha sida rasmiga ah, laakiin daawada dhirta oo la mid ah waxay u baahan tahay sax ah qiyaasta qiyaasta. Haweenka ku jira meel xiiso leh, oo ka sarreysa heerka sicir lagu talinayo waxay sababi kartaa dhiigbax daran iyo joojinta uurka.
Guryaha qadiimiga ah ee cuntooyinka ah waxaad ka heli kartaa talooyin ku saabsan diyaarinta qaababka qaaska ah, kuwaas oo awoowayaasheena loo isticmaalo sida sunta dhimashada ee uurjiifka aan la rabin.
Maanta, farsamooyinkan soo noqnoqonaya waxaa jira waxyaabo badan oo kala duwan oo aan si waxtar lahayn u ah caafimaadka hooyada suurtogalka ah.
Inkastoo liiska dheeraadka ah ee cudurada oo daaweyn kara ubaxa iyo caleemaha geedka, ha iloobin suntooda. Marka loo eego tan, hooyooyinka uurka leh, haweenka wakhtiga nuujinta iyo carruurta aan gaarin da'da laba iyo toban, waxay qaadan karaan wax daawo ah iyo daawooyin ka soo qaada tansy kuwaas oo si khatar ah looga hortago.
Sidoo kale, ma isticmaali kartid cawska si dad ah oo leh sheyba shakhsiyadeed shakhsi ahaaneed ee qaybaha dhirta.
Ma taqaanaa? Ganacsatada reer Ruushka waxay isticmaalaan budada tansy si ay u ilaaliyaan hilibka: badeecada waxaa lagu rusheeyaa budo ah waxayna ku duudduubtay maro - sidaasi waxay noqon kartaa mid si nabadgelyo ah loogu kaxeyn karo fogaan dheer.
Geedhu waa xasaasiyad adag. Si taxadar gaar ah waa in loo daaweeyaa naqshadaha iyo dadka u nugul kooxda Asteraceae asteraceae (chrysanthemums, daisies, ragweed).
Si kastaba ha ahaatee, ha dhexgalin baaritaanka caafimaadka ee horudhac iyo la-tashiga takhasusle. Adigu madaxbanaani ma ogaan kartid oo aad u qori kartaa daaweyn.
Waxaa intaa dheer, qaadashada mudada dheer ee dhirta qudaarta waxay keeni kartaa dhibaatooyin daran, sumayn iyo xitaa dhimasho. Dhaqanka caafimaadka, waxaa jiray xaalado ay dadku ku farxeen noloshooda sababtoo ah 10 dhibcood oo saliid laga soo shubo. Calaamadaha walaaca ee muujinaya xad dhaafka daawooyinka dabiiciga ah waa:
lallabbo iyo matag;
xanuunka caloosha oo adag, casiraad;
Xaaladahaas oo kale, waa inaad isla markiiba dushaa caloosha oo aad qaadatid daawo-qaadaha. Haddii talaabooyinkaas ka dib calaamadaha aan la tirtirin, la tasho dhakhtar.
Marka la eego suntan dhirta, dad badan ayaa aad u taxaddar leh marka goosashada. Laakiin dhab ahaan, ururinta alaabta ceeriin ceeriin ka soo tansy ma aha mid ka duwan ka soo ururinta dhirta kale daawooyinka.
Waa muhiim! In la hagaajiyo alaabta ceeriin ah waa in aan la goynin meel u dhow wadooyinka mashquulka ah iyo kuwa warshadaha. Taasina waxay u fiicantahay in la fariisto cawska kaynta.
Hadafyada daaweynta, kaliya dambiilo ubax ah ayaa ku haboon. Xilliga xagaaga, waxaa lagu googooyaa gacmo ama la gooyaa mindi. Xaaladdan, waxaad qabsan kartaa ilaa 4 sentimitir oo ah qaabka peduncade.
Ka dibna, waxyaabaha la soo ururiyay waxaa lagu daboolaa lakab khafiif ah oo ku yaal xaashi kaarbo ama qalab casri ah oo qalajinaya. Nidaamkan waxaa lagu sameeyaa si fiican oo hawo leh oo looga ilaaliyo qolka qorraxda tooska ah.
Sare u fiican. Haddii ay meel ka baxsan tahay, waxaa fiican in la isticmaalo qalajiyaha korontada ama foornada si loo qallalo cawska. Xaaladdan, habka soo iibsiga waa in lagu fuliyaa heerkul ah + 40 ... + 45 darajo. Ka dib markaa, cawska diyaarka ah ayaa la jajabiyaa oo waxaa loo duubaa kaydinta bacaha warqadaha ama bacaha dhogorta ah. Waxay si fiican ugu tageen meel gudcur ah oo qallalan oo qalalan. Haddii shuruudaha oo dhan la buuxiyo, cawsku wuxuu haysan karaa tayada waxtar leh ilaa 3 sano.
Sida loo qaato tansy: Cunto
Daaweynta guriga, daawada dhaqanka intiisa badani waxay bixisaa daroogada qaabka dhirta geedaha ama faleebo.
Waxaan kugula talineynaa inaad akhrido waxa faa'iido leh iyo sida dhirta loo isticmaalo daawooyinka daawada dhaqameedyada, sida: Doodwanaag, boodhadhka, shimbiraha, barkada, barkada, barxadda, dharka iyo lugta.
Sidoo kale caan waa saliid asaasi ah oo tansi ah.
Aan u fiirsanno waxa ku saabsan, iyo sida loo diyaariyo daawada guriga, waxa ku jira, qiyaasta qiyaasta, iyo goorta la cabbo.
Wixii diyaarinta dhirta bogsashada waxaad u baahan doontaa 2 qaado oo ah inflorescences qalajiyey iyo nus litir oo biyo karkaraya. Marka hore, cawska la jajabiyey ayaa lagu shubay hoose ee digsiga enamelled, ka dibna waxaa lagu shubay biyo. Ka dibna weelka ku rid shucaac hoose oo cadaadis aan ka badneyn 10 daqiiqo. Marka xigta, ku duub dareeraha oo ka tag meel diiran. Saacad ka dib, maraq waa in la sifeeyaa waana la isticmaali karaa. Cabbitaanka waxaa la muujiyaa in la cabbo sadex jeer maalintii iyo 1 qaado oo ah helminthiasis, qalal, cagaarshow dabadheeraad ah, cillad beerka iyo cholangitis.
Waa muhiim! Daawada la dhammeeyey ee ka timaadda tansy lama kaydin karo meel diiran. Xaaladahan oo kale, fiiro gaar ah oo walxaha sunta ah ee ku jira qaybaheeda ayaa kor u qaadi doona saacad kasta mar kasta. Sidaa daraadeed, u diyaari daroogada illaa 1 maalin, kuna kaydi haraaga aan la isticmaalin ee qaboojiyaha.
Cuntada caadiga ah ee faleebo ee tansy waxay bixisaa isku xirka 5 garaam oo ubaxyo la qalajiyey iyo 250 millilitir oo biyo ah karkaraya. Awoodda leh isku dar ah si loo daboolo oo uga baxo 3 saacadood meel diiran ku adkaato. Ka hor intaadan qaadin dareeraha waa in loo gudbiyaa iyada oo loo maro cheesecloth ama ciddiyaha.
Qalabkani waxaa laga qaadaa boogta aafada, colitis, enterocolitis iyo cudurrada kale ee habka dheef-shiidka. Nidaamka lagu taliyay: 1 qaado oo ah faleebo saddex jeer maalintii, nus saac ka hor cuntada.
Laakiin buugaagta tixraaca bukaanka ayaa waxaa jira habab kala duwan oo loo soo saaro geedaha dabiiciga ah. Waa kuwan qaar ka mid ah:
Iyadoo dib loo dhigo caadada: 1 qaado oo ah dambiilaha ubaxyada la jajabiyey ee tansy waxaa lagu shubay litir biyo ah karkaraya, daboolay dabool leh, duudduubay oo ku adkaystay ilaa hal saac. Ka dib sheygaas. Cab hal nus ah galaas laba jeer maalintii kahor cuntooyinka.
Iyada oo laabmaatada: Awoodda waxaa laga diyaariyey 1 qaado oo ah qalabka ceeriin qallalan iyo 250 millilitir oo biyo ah karkaraya. Dhammaan waxyaalaha maaddada loo isticmaalo waxaa lagu dhejiyaa darmarafka waxayna bixiyaan 2 saacadood si loo buufiyo. Kadibna geddigaa oo ku qaad gudaha gudaha 30 millilitir saddex jeer maalintii muddo rubuc ah hal saac ka hor cuntada.
Iyada oo shuban: waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la buuxiyo litir biyo ah oo loo keenay karkar 5 garaam oo caws ah oo ka baxsan saacad iyo badh. Kadibna, dareeraha sifeeya ayaa la qaadaa 100 millilitir laba jeer maalintii kahor cuntada. Qawaaniinta subaxda waa in lagu sameeyaa calool madhan.
In cudurada nidaamka wadnaha iyo xididdada Diyaarso faafin 1 qaado oo ah walxo cayriin iyo 400 millilitir oo biyo ah karkaraya. Ku adkeyso daroogada meel diiran qiyaastii 4 saacadood, ka dibna fayodhaw oo qaado rubuc koobka 3 jeer maalintii maalintii 20 daqiiqo cuntada ka hor.
Xummad badan iyo qabow Waxaa lagula talinayaa inaad ku shubto 5 garaam oo cawska ah halkii litir oo biyo ah karkaraya kuna adkeyso wax ka badan 30 daqiiqo. Waa lagama maarmaan in la cabo daawada 100 ml 2 jeer maalintii.
Ma taqaanaa? Waqtiyadii hore, tansy waxaa loo adeegsaday boodhka. By habka, geedka wuxuu ahaa mid aad u fiican oo ay kufin.
Haddii aad saliid ka soo iibsato hoolka dawooyinka ee gurigaaga, waa inaadan marnaba gudaha ku gelin. Waa daaweyn heer sare ah ee daaweynta dibadda ee nabarradaha nudaha, furunculosis, gout, laabotimism, canug, cudurrada maqaarka iyo qalalaasaha.
Koorsada daaweynta waxay ka kooban tahay diyaarinta qaboojin khaas ah, musqulaha bacriminta iyo miisaska saliidda. Wixii daaweynta ee xubnaha mareenka caloosha iyo mindhicirada waxaa loo oggol yahay in ay isticmaalaan badeecadan sida qayb kale oo dheellitiran. Waxaa la diyaariyaa laga bilaabo 1 qaado oo ah ubaxyo la jajabiyey ee tansy, nus litir biyo qabow la qaboojiyey.
Soo ogow waxa faa'iido leh: bocorka iyo saliidda kedar, saliid walnut, oregano, madow iyo madow.
Maaddooyinka oo dhan waxay isku daraan oo ku adkeeyaan weel xiran ilaa 4 saacadood. Kadibna cadaadis oo ku dar 2 dhibcood oo saliid ah. Qaado 100 millilitir oo dareere laba jeer maalintii 20 daqiiqo cuntada ka hor.
Sida aad arki karto, diyaarinta tansy ma noqon doonto mid aad u sarreeya ee guri kasta. Laakiin ha u qaadan cawska sida argagaxa - xusuuso sarkhadeeda oo ha dayicin booqashada takhtarka si talo bixin ah.